Nagu saabsan - Jinan CBS Industry Company Limited
Qalabaynta Mashiinka Muraayadda
Mashiinka kululeeyaha 'Spacer IGU'
Mashiinka Mashiinka Goynta
Mashiinka Dahaarka Muraayadda
Mashiinka Kale ee Wax Lagu Baro
Daaha xariiqda wax soo saarka galaaska
SHIRKADDA CUDURADDA CBS OO XADIDAN
Qalabka wax lagu farsameeyo galaaska ee loo yaqaan 'CBS' waxaa ka mid ah xariijinta wax soo saarka muraayadda, mashiinka dhalada oo toosan iyo mid toosan, mashiinka dhalada galaaska iyo miiska goynta dhalada iwm.
Si loo buuxiyo shuruudaha soo-saarayaasha unugyada kala-soocida kala-soocida ah (CBU), CBS waxay si joogto ah u maal-gashaa cilmi-baarista iyo soo-saarista qalab cusub. Qalabkeena galaasyada dahaarka leh ayaa si balaaran loogu adeegsadaa dhibka birta caadiga ah (aluminiumka, bareeraha birta, iwm.)
Soo jeedinta wax soo saarka bilowga ah, waxaan heysanaa xal fudud oo qaata teknoolojiyada daboolida butyl dhalaalka kulul, qulqulka howsha oo aad u fudud, maalgashiga hooseeya, oo sidoo kale ah qaab aad u macquul ah oo loogu talagalay aagga cimilada gaarka ah. Soo-jeedin wax-soo-saar ballaaran, waxaan leenahay guddi toos ah oo toos ah oo toos ah oo riixaya khadadka wax soo saarka muraayadda ee cabbirka kala duwan, ugu badnaan. xajmiga qaybta muraayadda dahaarka ilaa 2700x3500mm. Mashiinka hawlgalka cusub ee koontaroolaya unugga riixaya wuxuu ka dhigayaa IGU inuu noqdo mid sax ah hawlgalkuna uu noqdo mid fudud oo sahlan.
Iyada oo ku saleysan tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah ee dahaarka soo-saarka wax-soo-saarka muraayadda, waxaan ku ballaarinnay kala-soo-saarkayaga qalabka wax lagu maydho galaaska, mashiinka wax lagu gooyo muraayadaha iyo qalabka wax lagu gooyo iwm. Taxanahayaga 'GWG' oo si toos ah u dhaqaaya muraayad xawaare sare leh wuxuu soo bandhigayaa xalka ugu fiican ee dhalada, kaas oo leh xawaare sare, wax soo saar aad u sareeya
Qolka 1706, Dhismaha 3, Samtak Plaza, No. 129, Yingxiongshan Road, Jinan City, Shandong, Shiinaha 250002
Fakis:+86 531 89195709